Madaxweynuhu milateri miyuu la hadlayaa mise Maleeshiyo? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynuhu milateri miyuu la hadlayaa mise Maleeshiyo?
Mareeg.com: Sida ay baahisay warbaahinta dowladda Soomaaliya, madaxweyne Xasan ayaa shalay booqasho gaaban ku tegay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isagoo dhulka maray.
Waxaa madaxweynaha socdaalkiisa ku wehlinayey wasiirka difaaca C/qaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka Amniga C/rizaaq Cumar Maxamed, taliyaha milateriga Jen. Indha-qarshe, abaanduulaha ciidanka milateriga Jen, Daahir Khaliif Cilmi iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha xiran dharka ciidanka oo markii ugu horreysay lagu arkay ayaa u khudbeeyey askar dowladda taabacsan oo ku sugan Shabeellaha Hoose, waxaa sidoo kale halkaas ka muuqanayey maleeshiyaad badan oo aan wadan wax labis ciidan ah.
“Waan idin ku bogaadinayaa sida geesinimada leh ee aad cadowga u jebiseen. Naftiina ayaad u hurteen in aad waddanka difaacdaan, sharaftiisana aad soo celisaan. Dowladda iyo shacabkana intaas way idin og yihiin, waxaadna ku jirtaan jihaadka saxda oo ah mid aad dooneysaan inaad shacabkiina ku xorreysaan’’ ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa u ballanqaaday ciidamada ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ee dhawaanahaan dagaalka kula jiray Alshabaab in la dallacsiinayo.
“Waxay dowladdu diyaar u tahay inay baahidiina haqabtirto, taasina waa waajib ina saaran. Geesiyaashii ku dhintey goobaha dagaalka waxaan caddeynayaa in carruurtooda daryeelka ay xaqa u leeyihiin la siin doono’’ ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan.
Dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo Alshabaab soo qaadeen, ayaa waxaa ciidamada kasoo gaaray khasaare nafeed oo badan, hase ahaatee waxey xajisteen deegaanadii Alshabaab kusoo weerareen ee kala ahaa: Awdheegle iyo Mubaarak.
Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ah gobol ay ku badanyihiin dagaallada beeleed iyo kuwa Alshabaab geystaan, waxaana sidoo kale halkaas dhibaato ba’an ku haya isbaarooyin ay dhiganayaan qaar ka mid ah askarta iyo maleeshiyo beeleed.
Dhawaan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiisha milateriga ee gobolka Shabeellaha Hoose isugu fanaan “Intaas oo isbaaro ayaa ii taalla Shabeellaha Hoose”.
Sida ka muuqatay, ragga uu u khudbeynayey madaxweyne Xasan, oo qaar badan oo ka mid ah xirnaayeen labiska dadka caadiga ah, waxaa xilli kasta suuraagal ah in dhallinyaradaasi sameyn karaan wixii ay doonaan.
Akhri magacyada guddiga baaraya dilkii xildhibaan Yuusuf Dirir